Dimokraasiin Itiyoopiyaa keessaa Boodatti Hafe jedha Freedom House
Guraandhalaa 01, 2011
Jarmayaan mirga namaaf falmu kan Freedom House jedhamu jalqaba waggaa kanaa gabaasa baaseen bulchiinsa muummicha ministeeraa Meles jalatti Itiyoopiyaan yeroo dhaa gara yerootti demokraasii irraa boodatti deebi’aa adeemti jedhee jira.
Freedom Housetti itti gaafatamaan kutaa qorannaa Mr. Arch Puddinton filannoo Caamsaa kan bara 2002 as adeemsi dimokraasii Ethiopiaa keessaa gad adeemaa deeme kan jarmayaan isaanii jedhe yeroo ibsan barcuma paarlaamaa biyyattii 547 keessaa paartiin biyya bulchuuf paartileen deggertoota isaa ta’an barcuma 545 injifanne jechuu isaanii ti.
Adeemsa filannoo sanaa kanneen hordofan taajjabdoonni walabaa immoo filannoon sun dorgommiin kan keessatti hin argamne walaba kan hin taaneef innumaa iyyuu waliin dha’amuu isaa ibsaniiru.
Freedom House qorannaa isaa kan geggeessu karaa garee isaa haala dimokraasii Itiyoopiyaa keessaa qoratu uummataa fi hoogganoota garee mormituu haasofsiisuun ta’uu Mr. Pundington ibsaniiru.
Mootummaa Itiyoopiyaa kana dura himannaa gareelee mirga namaan irratti dhiyaatan dhugaa irraa kan fagaate jechuun ofi irraa faccisaa tureera. Keessumaa gareen mirga namaa Human Rights Watch gabaasalee inni baase beekaa maqaa mootummaa xureessuufi jedhee jira.
Gabaasi nuti yeroo yerootti baafnu akka akeekkachiisaa ti kan jedhan Mr. Pudington yeroon isaa wayita ga’u aariin uummataa bobaa’uun hin hafu jedhaniiru.
Gabaasa guutuu MP3 tuquun dhaggeefadha